သက်ရောက်တွက်နည်း.. တစ်နှစ်ကို တစ်ခါ မိမိကိုယ်တိုင် ဗေဒင်တွက်ကြည့်ဖို့ နည်းလေးပါ။ – Myanmar Breaking News
တွက်နည်း မိမိရောက်ဆဲ အသက်ကိုတည် ၈ နဲ့စားပါ။ အကြွင်းကိုယူ၍ လက်ယာရစ်ပါ။ ဥပမာ ၂၅ နှစ်ပြည့်ပြီး နောက်တစ်ရက်ဆိုရင် ၂၆ ယူရပါမည်။
တနင်္လာသား ၂ ကြွင်းဖြစ်၍ တနင်္လာသက်ရောက်မှ စ၍ ၂ ကွက်မြောက်ကို ကြည့်လျှင် အင်္ဂါသက်ရောက် ကျသောကြောင့် အဂါင်္သက်ရောက်အဟောကိုဖတ်ပါ။
အချစ်ရေး မေတ္တာရေး စန်းပွင့်ခြင်း အမွေအနှစ် ဥစ္စာများရတတ်ခြင်း မောင်ကောက်ရ သူဌေးကျော်ကိန်းဖြစ်လို့ စီးပွားဥစ္စာ ရတနာတိုးတတ်၍ အလုပ်အကိုင်အဆင်ပြေ မြေယာအမွေအနှစ်ရတတ်ပါမည်။ အထက်လူကြီးများ၏ ချီးမြှင့်မြှောက်စားမူခံရတတ်ပါမည်။ ကဆုန် ဝါခေါင် တန်ဆောင်မုန်းလများတွင် ကြာသပတေး တနင်္လာနေ့သားများကြောင့် အလုပ်စီးပွား တိုးတတ်အဆင်ပြေနိုင်ပါမည်။ အိမ်ထောင်ကျတတ်မည်။ ယောင်္ကျားလေးဆိုလျှင် မိန်းကလေးနှင့် အချစ်နယ်လွန်တတ်ပြီး မယူမဖြစ်ယူရတတ်မည်။ မယူခဲ့သော်ငွေလျော်ရကိန်း ကြုံတတ်ပါသည်။
အချစ်ရေးစန်းပွင့်ြ့ပီး အိမ်ထောင်ကျတတ်မည်။ အိုးသစ်အိမ်သစ် နေရာသစ် ရွှေ့ပြောင်းရခြင်းများ ရာထူး အလုပ်အကိုင် အဆင်ပြေတိုးတတ် ငွေကြေးရှာဖွေလို့ ကောင်းချိန်ဖြစ်မည်။ အချစ်ရေးတွင် အပြိုင်အဆိုင်များပေါ်ပေါက်တတ်ပြီး ချစ်မူရေးရာကိစ္စများ ဖြေရှင်းရတတ်ပါမည်။ အချစ်အတွက်နဲ့ စကားများ ရန်များ မနာလိုရန်ငြိုးဖွဲ့ခြင်း ခံရတတ်ပါသည်။ အရှေ့တောင်အရပ်က လာဘ်လာဘများ ဝင်လာတတ်ပါသည်။ လူလွတ်ဖြစ်လျှင် အိမ်ထောင်ကျတတ်ပါမည်။ စိတ်ချမ်းသာရသောခရီး ဘုရားဖူးခရီးသွားရတတ်ပါမည်။ ကျောက်နီ ပတ္တမြား ရတနာ ရွှေငွေ ရရှိစေမဲ့နှစ်ဖြစ်သည်။ ဒီနှစ်ထဲတွင် ရသလောက် ပြန်ထွက်တတ် မမြဲတတ်၍ သတိရှိဖို့ လိုပါမည်။
တပေါင်း တန်ခူး ကဆုန်လတွင် ငွေကြေးလာဘ်ရွှင်စေပါမည်။ အလုပ်အကိုင်များ မဆင်ပြေစီးပွားရေးတိုးတတ် အကျိုးခံစားခွင့်များ ရရှိနိုင်မည့်နှစ်ဖြစ်သည်။ လူပျိုအပျိုဖြစ်လျှင် အချစ်ရေးစန်းပွင့်တဲ့နှစ်ဖြစ်ပြီး အနောက်အရပ်ကချစ်သူတွေ့တတ်ပါမည်။ အချစ်ရေးအဆင်ပြေ အိမ်ထောင်ရေးအဆင်ပြေတဲ့နှစ်ဖြစ်မည်။ တစ်ခုသတိထားရမှာက အချစ်ကိုမယုံလွယ်ပါနှင့်။ သူတစ်ပါးကြောင့် သားသမီးကြောင့် မျက်နှာပျက် အရှက်ရတတ်ခြင်း စွပ်စွဲပြောဆိုခံရခြင်းများ ခံရတတ်ပါသည်။ ကွဲကွာခဲ့သော အိမ်ထောင်ဘက် ချစ်သူနှင့် ပြန်လည်အဆင်ပြေပေါင်းဖက်ရတတ်ပါသည်။
အချစ်ရေး စန်းပွင့်သော နှစ်ဖြစ်၍ အိမ်ထောင်ကျတတ်ပါမည်။ ရှောင်လွဲ၍မရအောင် အိမ်ထောင်ကျကိန်းပါ။ အလုပ်အကိုင်ရာထူးတိုးမြှင့်ခံရခြင်း အိုးသစ်အိမ်သစ် နေရာသစ်သို့ရွေ့ပြောင်းရခြင်း မင်းစိုးရာဇာများမှ ချီးမြှင့်မြှောက်စားခံရခြင်း ရပ်ရွာအုပ်ချုပ်လူကြီးဖြစ်ရခြင်း ရပ်ရေးရွာရေး နိုင်ငံရေးနှင့် ဌာနဆိုင်ရာများတွင် ဦးစီးဦးဆောင်ပြုလုပ်ရခြင်း အကြီးအကဲဖြစ်ရတတ်ခြင်း အလုပ်အကိုင်စီးပွားတိုးတတ် ရတနာရွှေငွေလာဘ်လာဘကောင်းများ တိုးပွားစေခြင်း မင်္ဂလာရှိသောအမူကိစ္စများ ဆောင်ရွက်ပေးရခြင်းများ ဆန်ရေ စပါး ရွှေငွေပြည့်စုံစွာ ရမည့်နှစ်ဖြစ်ပါသည်။ ရဟန်းဖြစ်လျှင်လဲ ကျောင်းဆောင် အလှူရှင်ပေါ်လာပါမည်။
ဂြိုလ်စားတွက်နည်းကိုတော့ အခွင့်သာလျှင် တင်ပေးပါ့မယ်ရှင်….
တနင်္လာသက်ရောက်။ ။ မိမိအိမ်ဘုရားတွင် ကံကော် ( ၂ ) ညွန့်၊ နှင်းဆီ ( ၇ ) ပွင့် နှင့် နန်းကြီးသုပ် ၊နံကထိုင် ၊နွားနို့ နှင့် ကိတ်မုန့် လှူပေးပါ။
စနေနေ့ ညနေမှာ ထန်းလျှက် ( ၁၁ ) ခဲ စက္ကူကန်တော့နှင့် ထုပ်၍ ခွေးလေးတွေကိုပစ် ပေါက်ကြွေးလိုက်ပါ။
ဥပမာ။ ။ သွားရင်းလာရင်းနဲ့ လမ်းမပေါ်ရောက်လာတဲ့ အကောင်ငယ်လေးတွေကို သူများတတ်နင်းမိမှာ ဆိုးလို့ လမ်းဘေးပြန်ချပေးခြင်း၊ယာဉ်သွားလမ်းပေါ်ရောက်နေတဲ့ ခဲတွေ တွေ့ခဲ့ရင် ဖယ်ပေးခြင်း၊မိမိရပ်ကွက် ဒါမှမဟုတ် မိမိလမ်းထဲမှာ ချိုင့်ခွက်တွေရှိနေရင် တစ်ခုခုနဲ့ ညီညာအောင် လုပ်ပေးခြင်း၊ရေအိုးစင်လှူခြင်း၊ရေတွင်းရေကန် လမ်းတံတား အလှူခံဌာနတွေမှာ တတ်နိုင်သလောက် ပါဝင်လှူဒါန်းခြင်း၊ ရပ်ကွက်ထဲမှာရှိတဲ့ လမ်းပေါ်က ခွေးလေးတွေကို အစာကျွေးခြင်း၊ ခိုစာကျွေးခြင်း၊ ငှက်ကလေးများလွှတ်ပေးခြင်း၊ ငါးလွှတ်ပေးခြင်း၊ ငါးစာကျွေးခြင်း၊
ဘုန်းကြီးကျောင်းတို့ ဘုရားတို့ ရောက်ရင်လဲ တံမျက်စည်းလှဲ ရေအိမ်သန့်ရှင်းပေးခြင်း၊ သက်ကြီးရွယ်အိုများကို ကူညီဖေးမပေးခြင်း၊ မြို့ကြီးတွေမှာဆိုရင်လဲ ကားစီးတာကအစ မိမိထက်ကြီးသူကို နေရာပေးခြင်း၊ပြည့်တဲ့အိုးကို ထပ်မဖြည့်ဘဲ အမှန်တကယ် လိုအပ်နေတဲ့နေရာကိုရွေးချယ်ပြီး အလှူဒါန ပြုပေးခြင်း စသည် စသည်ဖြင့် ခါတိုင်းထက်ပိုပြီး လုပ်ပေးမယ်ဆိုရင် အစစအရာရာ အတွက် ယတြာလုပ်ပြီးသလိုပါဘဲ ….
သကျရောကျတှကျနညျး.. တဈနှဈကို တဈခါ မိမိကိုယျတိုငျ ဗဒေငျတှကျကွညျ့ဖို့ နညျးလေးပါ။